ओलीले चलचित्रका लागि यसरी गरे अभिनय,बिरोधसभामै सुटिङ ! « Channel Np
मनोरञ्जन टिभी प्रवास पत्रिका स्वास्थ्य/जीवनशैली अन्तर्वार्ता अचम्म धर्म/दर्शन कृषि/प्रविधि ENGLISH ओलीले चलचित्रका लागि यसरी गरे अभिनय,बिरोधसभामै सुटिङ !
प्रकाशित मिति : Saturday, January 7th, 2017 at 2:32 AM
काठमाण्डौ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली चलचित्रको नायकका रुपमा पर्दामा आउँदैछन् । शुक्रबार सोका लागि केपी ओलीले अभिनय गरेका छन् । उनलाई राष्ट्रवादी नायकका रुपमा चित्रण गरिएको चलचित्र रातो सूर्यको सुटिङ शुक्रबार काठमाडौंमा गरिएको हो । एमालेसहित ९ दलले गरेको बिरोधसभामा रातो सूर्य युनिटले सुटिङ गरेको थियो । मुख्य कलाकार ओली विरोधसभाको नेतृत्व गरिरहेका थिए ।